29th Branch at Jhumka
काठमाण्डौं, चैत्र १५, २०६६ । सनराइज बैंक लिमिटेडले सुनसरी जिल्लाको झुम्कामा आफ्नो २९ औं शाखा बिस्तार गरी बैंकिङ्ग कारोबार शुरु गरेको छ । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको वाहुल्यता रहदै आएको यस क्षेत्रमा बैंकले एउटा अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्नुका साथै झुम्का वरपरका स्थानिय क्षेत्रमा साना एवं मझौला व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नको लागी शाखा विस्तार गरिएको बैंकका नायव महाप्रवन्धक श्री बलराम बिष्टले बताउनुभयो । बैंकले स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बैंकिङ्ग प्रणालीको विकासका साथै नयाँ नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने बैंकको लक्ष्य रहेको पनि श्री बिष्टले बताउनुभयो । बैंकले हालसम्ममा रु. १३ अर्ब ७५ करोड निक्षेप संकलन गरी रु. १२ अर्ब १५ करोड कर्जा प्रवाह गरेको तथा १ अर्ब ३६ करोड लगानी गर्न सफल रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षो पुस महिनासम्ममा बैंकले रु. १५ करोड २२ लाख संचालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल रहेको छ । हाल बैंकका ३२ वटा ए.टी.एम.हरु संचालनमा रहेका छन्।